डेम: डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन भनेको के हो? | Martech Zone
बुधबार, फेब्रुअरी 15, 2012 मंगलवार, मे 10, 2016 निकोलस जिमनेज
डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन (डीएएम) ले प्रबंधन कार्यहरू र इन्जेसन, एनोटेशन, कैटलिing, भण्डारण, पुनःप्राप्ति र डिजिटल सम्पत्तिहरूको वितरण वरपरका निर्णयहरू समावेश गर्दछ। डिजिटल फोटोग्राफहरू, एनिमेशनहरू, भिडियोहरू र संगीतको लक्षित क्षेत्रहरूको उदाहरणका छन् मिडिया सम्पत्ति व्यवस्थापन (DAM को उप-कोटी)।
यसको लागि केस बनाउन गाह्रो छ डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन अथक रूपमा स्पष्ट रूपमा देखाइएको बिना नै। उदाहरण को लागी: आज मार्केटिंग डिजिटल मीडिया मा धेरै निर्भर गर्दछ। र समय पैसा हो। त्यसैले मार्केटरहरूले आफ्नो डिजिटल मिडिया समयको अधिक बढी उत्पादक, लाभदायक कार्यहरूमा र अनावश्यक र अनावश्यक हाउसकीपिंगमा कम खर्च गर्नुपर्दछ।
हामी यी चीजहरू सहजै जान्दछौं। त्यसैले यो छक्कलाग्दो कुरा हो, छोटो समयमा कि म DAM को कथा बताउनमा संलग्न भएको छु, मैले डेमको बारेमा संगठनहरूको जागरूकतामा निरन्तर र द्रुत वृद्धि देखेको छु। भन्नुको मतलब यो हो कि, हालसम्म यी संगठनहरूलाई उनीहरूले के याद गरिरहेका थिए भन्ने बारे केही थाहा थिएन।
जे भए पनि कम्पनीले प्राय: डेम सफ्टवेयरको लागि किनमेल गर्न थाल्छ जब यसलाई थाहा हुन्छ कि पहिले, यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति ("अप्रबन्धित भोल्यूम" पढ्नुहोस्) डिजिटल सम्पत्तिमा छ र त्यो, दोस्रो, यसको विशाल डिजिटल सम्पत्ति लाइब्रेरीसँग काम गर्ने धेरै टाढा लाग्छ। पर्याप्त लाभ उपज बिना धेरै समय। यो उच्च शिक्षा, विज्ञापन, निर्माण, मनोरन्जन, गैर मुनाफा, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा प्रविधि सहित उद्योग को एक श्रृंखला भर मा सही भएको छ।
यसै ठाउँमा DAM आउँदछ। DAM प्रणालीहरू धेरै आकार र आकारमा आउँदछन्, तर तिनीहरू सबै कम से कम केहि गर्नको लागि बनाइएको छ: केन्द्रीय भण्डार, व्यवस्थित र डिजिटल सम्पत्ति वितरण। त्यसोभए तपाईको विक्रेता खोजीलाई मार्गनिर्देशन गर्न के जान्नु पर्छ?
डीएएम वितरण मोडेलहरू
विडेन उद्यमहरू हालसालै भेद वर्णन गर्दै एक राम्रो सेतो कागज जारी (र ओभरल्यापहरू) सफ्टवेयर-को रूपमा एक सेवा (सासा) बीचमा, परिसर र खुला स्रोत डीएएम समाधानहरू। यो जाँच गर्न एक राम्रो स्रोत हो कि तपाईं आफ्नो डीएएम विकल्पहरू अन्वेषण गर्न सुरू गर्दै हुनुहुन्छ।
यद्यपि थाहा पाउनु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि ती तीन सर्तहरू प्रत्येक DAM लाई परिभाषित गर्ने एक तरीका हो (वा कुनै सफ्टवेयर, त्यस वस्तुको लागि) विभिन्न मापदण्डको आधारमा। तिनीहरू परस्पर अनन्य छैनन् - यद्यपि व्यावहारिक रूपमा सास र स्थापित समाधानहरू बीच कुनै ओभरल्याप छैन।
सास डेम प्रणालीहरूले कार्यप्रवाहको सर्तमा लचिलोपन प्रदान गर्दछ र कम आईटी लागतहरूको साथ पहुँच। सफ्टवेयर र तपाईंको सम्पत्तिहरू क्लाउडमा होस्ट गरिएको छ (जुन, रिमोट सर्भरहरू)। जबकि एक सम्मानित DAM विक्रेता होस्टिंग विधि अत्यन्त सुरक्षित छ कि प्रयोग गर्दछ, केहि संगठनहरु संग नीति छ कि उनीहरु लाई आफ्नो सुविधा को बाहिर केहि संवेदनशील जानकारी दिनुबाट रोक। यदि तपाईं एक सरकारी खुफिया एजेन्सी हुनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, तपाईं सास डेम गर्न सक्नुहुन्न।
अर्कोतर्फ स्थापना गरिएको प्रोग्रामहरू सबै "इन-हाउस" हुन्। तपाईको संगठनको कामको लागि मिडियामा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रणको आवश्यक हुन सक्दछ जुन तपाईंको भवनमा डाटा र सर्भरहरू राख्दा मात्र आउँदछ। तैपनि, तपाईं यस तथ्यको बारे सचेत हुनुपर्दछ कि, जब सम्म तपाईं टाढाको सर्भरहरूमा तपाईंको डाटाको समर्थन गर्नुहुन्न, यस अभ्यासले तपाईंलाई जोखिममा खोल्दछ केही घटनाले तपाईंको सम्पत्ति पूर्णतया अप्राकृतिक छोड्नेछ। त्यो डेटा भ्रष्टाचार हुन सक्छ, तर यो चोरी, प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाहरू पनि हुन सक्छ।
अन्तमा, त्यहाँ खुला स्रोत छ। शब्दले सफ्टवेयरको कोड वा आर्किटेक्चर आफैंलाई जनाउँछ, तर सफ्टवेयर टाढाबाट पहुँच गरिएको छ वा तपाईंको आफ्नै घरका मेशिनहरूमा। तपाईं समाधान होस्ट गरिएको छ वा स्थापना गरिएको छ कि खुला स्रोत तपाईंको लागि सही छ वा छैन भन्नेमा तपाईंको निर्णय बेसीको पासोमा पर्नु हुँदैन। साथै, तपाईले यो तथ्यलाई नोट गर्नुपर्दछ कि सफ्टवेयरको खुला स्रोतले मात्र मूल्य थप्छ यदि तपाईं वा अरू कोहीसँग प्रोग्रामको नराम्रोतामा क्यापिटलाइज गर्न संसाधन छ।
कुनै पनि दुई संगठनको डीएएम आवश्यकताहरू एक समान छैनन्। जब सम्म तपाईं उत्तम-फिट समाधान खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ, घाँस अर्कोपट्टि हरियो हुनेछ।
जस्तो कि वितरण मोडेलमा विविधता पर्याप्त छैन, त्यहाँ सुविधा सेटको एक विस्तृत श्रृंखला पनि छ। केहि डीएएम विक्रेताहरू अरूको तुलनामा उत्तम हुन्छन् उनीहरूको प्रणालीमा तपाईंलाई बेच्न कोशिस गर्नु अघि उनीहरू तपाईंको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न उत्तम फिट छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्न, त्यसैले आवश्यक छ कि विस्तृत सूचीको विस्तृत सूचीको साथ तपाईं आफ्नो डेम शिकारमा जानु भन्दा यो महत्त्वपूर्ण छ।
अझ राम्रो: तपाईंको आवश्यकताहरू भत्काउनु पर्छ-हुनुपर्दछ र राम्रो-गर्न-कोटि कोटीहरू। तपाइँले कुनै सुविधाहरू नोट गर्नु पर्दछ जुन आवश्यक छ किनकी कुनै नियम, कानून वा अन्य नियमले तपाइँको बजार वा उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने।
यसले के गर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंले न केही थोरै सुविधाहरूको अन्त्य गर्नुभयो जुन तपाईं आफ्नो कार्यप्रवाहको कार्यकुशलता यथासक्दो सुधार गर्न सक्नुहुन्न न त थुप्रै सुविधाहरू जुन तपाईं आफैले घण्टी र सिट्टीको लागि तिर्ने पाउनुहुन्छ जस्तो कि तपाईंले कहिल्यै पाउनुहुन्न। आवश्यक छ वा प्रयोग गर्न चाहन्छ।
DAM का फाइदा
कार्यान्वयनको फाइदाका बारे सोच्दै डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली "काट्ने" लागत वा "बचत" समय को हिसाबले पर्याप्त छैन। यो डेमले कसरी तपाइँको संगठन र संसाधनहरूलाई असर गर्न सक्छ भन्ने हृदय मा पुग्दैन।
यसको सट्टामा, डेमको बारेमा सोच्नुहोस् "पुन: प्रक्षेपण"। हामी शब्द प्रयोग गर्ने तरीकामा DAM सफ्टवेयर सक्षम गर्दछ र व्यक्तिगत डिजिटल सम्पत्ति को repurposing को स्ट्रिमलाइन, तर (जब सही प्रयोग गरियो) यसले श्रम, डलर र प्रतिभामा समान प्रभाव पार्न सक्दछ।
एक डिजाइनर लिनुहोस्, उदाहरण को लागी। ऊ वा उनीले हाल प्रत्येक 10० घण्टा मध्ये १० बेवास्ता सम्पत्ति खोजहरू, संस्करण नियन्त्रण कार्यहरू र छवि पुस्तकालय हाउसकीपिंगमा खर्च गर्दछन्। डीएएम सेट अप गर्दै र सबैको लागि आवश्यकता हटाउँदा यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफ्नो डिजाइनरको घण्टा काट्नु पर्छ। यसको मतलब यो हो कि असक्षम, अव्यवसायिक श्रमको घण्टा अब एक डिजाइनर व्यायाम प्रयोग गर्न लगाउन सकिन्छ अनुमानित शक्ति: डिजाइन। तपाईंको बिक्री व्यक्ति, मार्केटि team टोली, इत्यादिलाई पनि त्यस्तै हुन्छ।
डेमको सौन्दर्य पर्याप्त छैन कि यसले तपाईंको रणनीति परिवर्तन गर्दछ वा तपाईंको काम राम्रो गर्दछ। यो यो छ कि तपाइँ उही समान रणनीति अधिक आक्रामक पछि लाग्न तपाईलाई स्वतन्त्र गर्नुहुन्छ र तपाइँको कामलाई अधिक समयको लागि केन्द्रित बनाउँदछ।
टैग: बाँधडिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापनफराकिलोउद्यम फराकिलो
ग्राहकहरूको कला प्रेममा खस्छ